Nagu saabsan | Shijiazhuang Huikang Cuntada Co., Ltd.
Shijiazhuang Huikang food Co., Ltd. waxaa la aasaasay 1993, iyada oo raasamaal diiwaangashan 10 milyan RMB. Waa shirkad baaxad weyn oo ka shaqeysa soosaarida cuntada sidoo kale waa isdhexgal wax soo saar, soo saaris iyo ganacsi.
Shirkadda cuntada ee Huikang waxay ku taalaa degmada Zhengding, ee gobolka Heibei, waxay ku dhowdahay garoonka diyaaradaha ee Shijiazhuang, oo u dhow wadada isku xirta Beijing-Shenzhen, iyo 240Km ilaa Beijing, oo 350km u jirta Port Tianjin. Waxaa jira boos juquraafi ahaan u weyn iyo tas-hiilaadyo taraafiko oo ku habboon.
Shirkaddu waxay daboolaysaa aag dhan 45000㎡, waxay leedahay hal aqoon isweydaarsi cunto karis leh, oo leh aagga 2800 ㎡, waxay soo saartaa 10 tan oo ah badeecooyin la kariyey maalin kasta; Hal aqoon-isweydaarsi dhammaystiran oo loogu talagalay ka-baaraandegista miraha khudradda iyo cuntada sarreenka leh bedkiisu yahay 1800㎡, ayaa soo saari kara 18 tan maalintii; Mid ka mid ah cilmi baarista iyo horumarinta aqoon isweydaarsiga loogu talagalay alaabada cusub, oo leh hal xarumo cilmi baaris oo dhameystiran; Saddex heerkul hooseeya, ayaa kaydin kara 3500 tan oo alaab ah; Hal sheybaar iyo sheybaarka falanqaynta jirka / kiimikada, oo leh qalab casri ah iyo qalab baaris ah; Intaa waxaa dheer, shirkaddu sidoo kale waxay leedahay baarkin bannaan oo lagu beero miraha iyo khudradda.
Shirkaddu waxay soo saari kartaa waxsoosaarka cuntada sarreenka ah (sida qashin qubka, wiinada, doubao, iwm) iyo miraha iyo khudradda (sida basasha, baradhada, karootada, kiwi fruit, strawberry, iwm) 3500 tan sanadkii, waxayna soo saari kartaa dhadhan barafaysan waxyaabaha hilibka, cuntada la kariyey 4000 tan sanadkii. Wax soo saarka waxaa loo soo diray Japan, America, Australia, Hongkong iyo dalal kale iyo gobollo. Iibinta badeecaduna waxay qayb weyn ku leedahay suuqa gudaha.
Shijiazhuang Huikang cuntada co., Ltd. waxay heshay liisanka hilibka la warshadeeyay kuleylka iyo wax soo saarkiisa oo laga soosaaray xayawaannada hilibka jeex jeexan oo uu qeexay Wasiirka Beeraha, Foresty iyo Kalluumeysiga japan ilaa 2001; waxay heshay shahaadada ISO9001 sanadkii 2002 iyo shahaadada HACCP ilaa 2003. Shirkadayadu waxay hirgalisay Tababar Soosaarid Wanaagsan iyo Habka Hawlgalka Nadaafadda Nadaafadda, iyo alaabooyinka la farsameeyay iyadoo loo raacayo sida looga baahan yahay Barta Xakamaynta Khatarta Khatarta, waxay samaysay baadhitaan tayo leh oo dhammaystiran iyo nidaam kormeer iyo kormeer. , si loo xaqiijiyo in badeecaduhu ay buuxin karaan heerka tayada ee dhoofinta cuntada.
Shirkaddayadu waa horyaalnimada tartanka warshaddan, waxay suuqa siisaa wax soo saar tayo sare leh oo ammaan ah, Waxaa lagu abaalmariyaa sumcad wanaagsan, waxayna noqotaa dhoofiyaha ldading ee Shiinaha. Waxaa doorbiday macaamiisha gudaha iyo kuwa hore.
Shijiazhuang Huikang Food Co., Ltd. had iyo jeer waxay raacdaa falsafadda ganacsiga ee "Tayada ayaa ah aasaaska horumarka shirkadda; daacadnimadu waa xoogga dhaqaajiya horumarka shirkadda. Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhaweynaynaa dhammaan warshadaha inay nagu soo biiraan oo ay abuuraan mustaqbal ifaya.